तौल कम गर्न हरेक दिन चुकन्दर र स्याउको जुस !! | सुदुरपश्चिम खबर
तौल कम गर्न हरेक दिन चुकन्दर र स्याउको जुस !!
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : भदौ १४, २०७८ 7
शरीरलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि मोटोपन कम गराउनुपर्छ । शरीरलाई मोटोपनबाट बचाउँन विभिन्न प्रकारका उपायहरु गर्ने गर्छन् । तर, धेरैले अत्यधिक बढेको तौल घटाउन सक्दैनन् ।
डाइटिङ गर्न असमर्थ भएमा केही जुसहरु पनि पिउन सकिन्छ जसले तौल घटाउन मद्दत गर्छ । हरेक दिन जुस पिउँदा शरीरको तौल घट्छ । फलफूलमा भिटामिन र प्रोटिन हुन्छ । जुन शरीरको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि फाइदाजनक हुन्छ । त्यसको लागि चुकन्दर र स्याउको जुस पिउन सकिन्छ ।
चुकन्दर र स्याउमा भारी मात्रामा भिटामिन र खनिज पाइन्छ । जसले शरीरको आवश्यकता पूरा गर्छ । स्याउमा फाइबर, भिटामिन सी, नाइट्रेस र फोलेट पाइन्छ । जसले पाचन प्रक्रियालाई मजबुत बनाउँछ । र तौल कम गर्न पनि मद्दत गर्छ ।
चुकन्दर र स्याउको जुस बनाउनका लागि ३ चुकन्दर, २ स्याउ लिएर तास्ने र यसमा आधा कागतीको रसमा एक चम्चा मह, तीन पात पुदिनाको पात र थोरै गुड लिएर तयार गर्ने र यसलाई बिहानको खाना खानका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । सेतीकाली न्युज बाट सभार